တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် ပထဝီနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ် COVID-19 ရောဂါမူလဇစ်မြစ် စုံစမ်းမှုတွင် အမေရိကန်က အသုံးချနေဟု မီဒီယာဖော်ပြ - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၂ ရက်က ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင် နှာခေါင်းစည်းတပ်ထားသော ခရီးသည်များအားတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံအား ဖိအားပေးရန် နှင့် ဗိုလ်ကျစိုးမိုးရေးဝါဒ ထိန်းသိမ်းထားရန် နိုင်ငံရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ် ၎င်း၏ COVID-19 ရောဂါမူလဇစ်မြစ် စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုတွင် အသုံးချနေကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံ Portal Geopolitika.ru ၏ မကြာသေးမီက ရေးသားဖော်ပြသော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အရ သိရသည်။
ဂျာမနီ ၊ ဩစတြီးယား ၊ တူရကီ ၊ ရုရှား နှင့် ကာဇက်စတန်နိုင်ငံများမှ ကျွမ်းကျင်သူများ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည့် ရုရှားနိုင်ငံ Novosibirsk မြို့၌ ဩဂုတ်လအတွင်း ကျင်းပခဲ့သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတွင် ကပ်ရောဂါမူလဇစ်မြစ်စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုတွင် အမေရိကန်က ပထဝီနိုင်ငံရေး လုပ်ဆောင်နေမှုနှင့်ပတ်သတ်၍ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ဆောင်းပါး၌ ဖော်ပြထားသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာကြသူများက အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါ မူလဇစ်မြစ်ခြေရာခံရာတွင် “ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖိနှိပ်ရန်အတွက်” နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်သုံးကာ “ ဘက်ပေါင်းစုံ စစ်ဆင်ရေး” လက်နက်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးချနေကြောင်းဆိုသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ၎င်း၏ နိုင်ငံရေးအရ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးမှု လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးသွားရမည်ကို စိုးရိမ်နေပြီး ယင်းအတွက်ကြောင့်ပင် COVID-19 ရောဂါ မူလဇစ်မြစ်ရှာဖွေခြင်း နှင့် ရှင်းကျန်းအရေးကိစ္စရပ်များတွင် သတင်းအမှားများ ထုတ်လွှင့်ရန် မီဒီယာကို ကြားခံ လက်နက်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် လူမှုကွန်ရက် ပလက်ဖောင်းများအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ထားသည့် အရေအတွက်အားဖြင့် တစ်ဒါဇင်မျှ မက ရှိသော ကုမ္ပဏီများသည် သတင်းအမှားများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လျင်လျင်မြန်မြန် ထုတ်လွှင့်ခြင်း နှင့် မထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းတို့နှင့်အတူ အခြေအနေများမှာ ပို၍ ဆိုးဝါးသထက်ဆိုးဝါးလာနေသည်။
“ အနောက်တိုင်းမီဒီယာတွေဟာ အမေရိကန်ရဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ အရေအတွက်များစွာသော ဇီဝဓာတ်ခွဲခန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာရယ် ၊ ပြီးတော့ အမေရိကန် ဇီဝလက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချို့သော မကောင်းပြောဆိုမှုတွေကို သတင်းအမှောင်ချထားကြပါတယ် ” ဟု ဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြထားပြီး “ ဥပမာပြရရင် အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တစ်ခါက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂျော်ဂျီယာမှာရှိတဲ့ Lugar centerက ဗိုင်းရပ်စ်လွှတ်ထွက်မှုလိုမျိုး အကြောင်းအရာပေါ့ ” ဟု ဆိုသည်။ (Xinhua)
“The western media have deliberately ignored the fact that the United States has set upalarge number of biological laboratories around the world and some scandals about American biological experiments,” it said. “For example, the United States once hadavirus leak in the Lugar center in Georgia.”
MOSCOW, Sept.5(Xinhua) — The United States is using its investigation into the origins of COVID-19 asapolitical tool to pressure China and preserve hegemony, according to an article published recently on the portal Geopolitika.ru.
Inaworkshop that took place in the Russian city of Novosibirsk in August, experts from Germany, Austria, Turkey, Russia and Kazakhstan gathered to discuss Washington’s geopolitical motives behind its investigation into the pandemic’s origins, according to the article.
The participants concluded that the United States is using COVID-19 origins tracing asaweapon of “comprehensive warfare” andaway to “suppress the pace of China’s development.”